Shiineysku waxay qaadan doonaan 750 milyan oo safar tareen inta lagu guda jiro safarka xagaaga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Shiineysku waxay qaadan doonaan 750 milyan oo safar tareen inta lagu guda jiro safarka xagaaga
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • News • Safarka Tareenka • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ardayda kulleejadu waxay ku noqdaan guryahooda markay ka yimaadaan jaamacadaha waxayna rabaan baahida booqashooyinka qoysaska iyo safarada cirka ah inta lagu gudajiro safarka xagaaga ee Shiinaha.
Socdaalka xagaaga badanaa waa xilli mashquul ah nidaamka tareenka Shiinaha
Socdaalka xagaaga ee xagaaga ayaa socon doona 62 maalmood.
Ugu sarreysa ku dhowaad 14 milyan oo safar rakaab ah maalin keliya ayaa la filayaa in la sameeyo.
Shiinaha ayaa la filayaa inuu arko 750 milyan oo safar oo tareen ah inta lagu guda jiro socdaalka xagaaga ee soo socda, ku dhowaad isku mid ah kan heerka 2019, xogta laga helay wadaha tareenka ee waddanka ayaa muujiyay Arbacadii.
Safarka xagaaga ee xagaaga ee sanadkan wuxuu socon doonaa 62 maalmood laga bilaabo 1da Luulyo ilaa 31ka Agoosto, sida laga soo xigtay Shirkadda Tareenka ee Shiinaha State Co., Ltd..
Ugu sarreysa ku dhowaad 14 milyan oo safar rakaab ah hal maalin ayaa la filayaa in la sameeyo inta lagu jiro mudadaas, ayuu yiri wadaha tareenka.
Socdaalka xagaaga badanaa waa xilli mashquul ah nidaamka tareenka ee Shiinaha maadaama ardayda kuleejka ay ka soo laabtaan guryahooda kana baxaan jaamacadaha isla markaana ay u raraan baahida booqashooyinka qoysaska iyo safarada cirka isku shareeraya.
Shirkadda Shirkadda Tareenka ee Shiinaha, Ltd., waxay ganacsi ahaan u sameysaa sida Shiinaha Tareenka ama CR, waa shirkad gaar loo leeyahay oo ganacsi gaar loo leeyahay oo fulisa adeegyada tareennada rakaabka iyo xamuulka ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha waana shirkad dowladdu leedahay oo lagu aasaasay hoosta "Sharciga Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha ee Dhammaan La-lahaanshaha Warshadaha Warshadaha."
Wasaaradda Maaliyaddu waxay ku shaqeysaa magaca Golaha Gobolka si ay u gutaan waajibaadka saamileyda. Waxay ka tirsanaan jirtay Wasaaradii Tareenka ee hada shaqeysay. Tareenka Shiinaha wuxuu ka shaqeeyaa gaadiidka rakaabka iyo xamuulka iyadoo loo marayo 21 shirkadood.